ခန့်မှန်းလက်လီရောင်းချမှုဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်လူမှုစစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုခြင်း Martech Zone
စနေနေ့, ဧပြီ 30, 2016 သောကြာနေ့, ဧပြီ 29, 2016 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ထားသည့်သိုလှောင်ရုံများတီထွင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံဥာဏ်များစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မကြာခဏဆိုသလိုဤကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏စျေးကွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သူတို့၏စျေးကွက်ဝေစုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများအပေါ်တွင် မူတည်၍ စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်။ သို့သော်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းများထဲသို့အနည်းငယ်ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတူးယူသောအခါ၎င်းတို့သည်အသုံးမဝင်သောတောင်များဒေတာများကိုစုဆောင်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အဘယ်ကြောင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်အခြေခံစံနှုန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်မဟုတ်ပါ လက်ရှိထားခြင်းစားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာရန်၊ ကျွန်ုပ်စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းကြိုးပမ်းမှုများသည်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည်၊ မကောင်းသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အလားတူကုမ္ပဏီများနှင့်အလားတူကုမ္ပဏီများနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သည်ကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သင့်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းရှိစာရင်းပေးသွင်းသူများ၏တိုးတက်မှုနှင့်အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ ရောင်းအားကိုခန့်မှန်းနိုင်သည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆန်းစစ်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်မပြုလုပ်နိုင်ပါသနည်း။ သင်၏စာရင်းသွင်းသူများ၏တန်ဖိုးများကို ၄ င်းတို့၏တက်ကြွမှု၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ပထဝီအနေအထားနှင့်လူ ဦး ရေစာရင်းအပေါ် မူတည်၍ သင်သိပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်ဒေတာထဲသို့စတင်ဝင်ရောက်ပါကမည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆိုဤလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဒေတာများထားရှိခြင်းသည်မည်မျှအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုချက်ချင်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်း၏အရောင်းအ ၀ ယ်အစားစျေးကွက်အားလုံးတွင်သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ရှိခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
တွစ်တာလိုပလက်ဖောင်းက link ထောက်လှမ်းရေးကိုဘာလို့မတည်ဆောက်တာလဲ။ မည်သည့်တိုတိုတိုမည်သူမဆိုလင့်ခ်ကိုမည်သူမြှင့်တင်သည်ဖြစ်စေ၊ တွစ်တာသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာ၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်များ၏သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပေးနိုင်သည့်အချက်အလက်များစွာကိုပေးနိုင်သည်။ တွစ်တာအသုံးပြုသူတိုင်းတွင်မျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရေးဆွဲထားသည့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မျိုးဆက်မှဝေမျှခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းစသည့်အချိတ်အဆက်၏သက်တမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချက်အလက်အပင်ကိုမြင်နိုင်သည်ဆိုပါစို့။ ! ငါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလုပ်ငန်းအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ သူတို့ကဒီဒေတာကို ၀ င်ခွင့်အတွက်လုံးဝပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီအစား၊ တွစ်တာကဘာမှမပံ့ပိုးပေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကမှောင်မိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ link shorteners တွေကိုမှီခိုအားထားနေရတယ်။
ဤတွင် Foursquare မှအလွန်အံ့သြဖွယ်ဥပမာတစ်ခုပါရှိသည်။ Chipotle မှာအစားအစာလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြissuesနာဖြစ်ခဲ့ရင်၊ Foursquare သည်စတိုးဆိုင်များတစ်လျှောက်ခြေလျင်အသွားအလာလမ်းကြောင်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သည် နောက်ဆုံးတွင်ဆုံးရှုံးမှုများကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်
ရလဒ်? Chipotle သည်၎င်း၏ပထမသုံးလပတ်ဝင်ငွေကိုကြေငြာခဲ့ပြီး Foursquare ၏ခန့်မှန်းချက်များသည်ပစ်မှတ်ထားပြီးရောင်းအား ၃၀% ကျဆင်းသွားသည်။ Foursquare သည်ဆုံးရှုံးမှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရုံသာမက ပို၍ ပင်ရဲရင့်စွာဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရောင်းဝယ်မှု၏ ၃၀% ကျဆင်းခြင်းထက်တူညီသောခြေလျင်အသွားအလာ ၂၃% ကျဆင်းခြင်းသည်အစုရှယ်ယာရှင်များကိုအာရုံစိုက်သင့်သည့်ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရေအတွက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ၎င်းက Chipotle သည်ဖောက်သည်များနှင့်ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်နေသည်ကိုပြသသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ Foursquare ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jeff Glueck
ထောက်လှမ်းရေးနှိုင်းယှဉ် features တွေ
ငါအချက်အလက်သိုလှောင်ရုံတစ်ခုတွင် factoids တစ်ဘီလီယံကျော်စုဆောင်းခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးထက်သူတို့၏ကြော်ငြာဘတ်ဂျက်များ၏တိုးတက်မှုအပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဒေတာများကိုရှင်းလင်းရန်နှင့် data သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ကိုငှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားတွန်းအားပေးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာမလုပ်နိုင်သေးတာတွေရှိခဲ့ရင်…ပိုကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းပြီးမှန်ကန်စွာတူးဖော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတောင်မဖော်နိုင်သေးပါဘူး။
များလွန်းသောကုမ္ပဏီများသည်စတော့ရှယ်ယာများပိုမိုရောင်းချခြင်းနှင့်သူတို့၏အင်္ဂါရပ်များ၌အချိန်ပိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည် အင်္ဂါရပ်များသည်အေးမြသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူကူးယူနိုင်သည်။ စားသုံးသူများအနိုင်ရရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက်ထောက်လှမ်းရေးသည်မည်သည့်ကုဒ်ထက်မဆို ပို၍ အဖိုးတန်သည်။
အာဏာ - သင်၏အချက်အလက်များရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းကိုအဓိကသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်သင့်အားခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အနေနှင့်နေရာယူထားသည်။
အဘိုး - ၀ န်ထမ်းများဘ ၀ ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အမှုဆောင်အရာရှိတစ် ဦး မှပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်ကူညီပေးသောအချက်အလက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်အချက်အလက်များကိုအချိန်တိုင်းကောက်ယူပါမည်။
Tags: ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုChipotleပေအသွားအလာစတုရန်းလေးထောင့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် analyticsလူမှုမီဒီယာ